တုတ်၏ပွနျလညျထူထောငျဘို့အစီအစဉ်ကို - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
Microsoft Word ကိုစာသားမစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါအတော်လေးမကြာခဏကပုံမှန်အတိုင်းစာသားကိုအထူးဇာတ်ကောင်မှထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ခုမှာ, သောစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားဖြစ်ပါသည်, ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦးကို tick ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းနှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
သင်္ကေတ box ထဲမှာတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသား Add
သင်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကိုထည့်သွင်းချင်ရှိရာစာရွက်ပေါ်တွင်အစက်အပြောက်အပေါ် 1. ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုမှ 2. ပြောင်းလဲမည် "ထည့်", Locate နှင့်ခလုတ်ကိုအဲဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သင်္ကေတ"control panel ထဲကပေါ် homonymous အုပ်စုတစ်ခါသုံး။
ခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှာဆက်ရေးမည်ကိုမီနူးထဲမှာ 3. , select လုပ်ပါ "အခြားဇာတ်ကောင်".
အဆိုပါ Find ပေးတဲ့ dialog box ကိုအမှန်ခြစ်သင်္ကေတ4။
ကောင်စီ: ဒါကြောင့်တာရှည်, drop-down list ကနေ "စာလုံး" ၌သင့်လျော်သော icon ကိုရှာ 'Wingdings "ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏စာရင်းချအနည်းငယ်စာစောင်ကိုဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
လိုချင်သောဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက် 5. စာနယ်ဇင်း "ထည့်".
စစ်ဆေးမှတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်, သငျသညျနောကျတတူညီတဲ့ menu က "အခြားဇာတ်ကောင်" တွင်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများရန်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှသင်္ကေတကိုရှာဖွေ, နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် box ထဲမှာတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။
မိမိစိတ်ကြိုက် font ကိုသုံးပြီးစစ်ဆေးမှုများထည့်သွင်းခြင်း
က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဇာတ်ကောင်ရဲ့ standard set ကိုတွင်ပါရှိသောသောဇာတ်ကောင်ကျွန်တော်တစ်ဦးဇာတ်ကောင် add နိုင်ပါသည်, သူတို့သည် သိ. , ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ကုဒ်ရှိပါတယ်။ တခါတရံမှာ, သို့သော်, အထူးဇာတ်ကောင်များ၏နိဒါန်းအဘို့, သင်ရုံသင်ကစာသားကိုရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက် font ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: Em Dash စေရန်နှုတ်ကပတ်တော်၌အဖြစ်
1. တစ်ဦး font ကို Select လုပ်ပါ "Wingdings 2".
2. သတင်းထုတ် "+ P ကို ​​Shift" အင်ျဂလိ layout ကိုအတွက်။
တကယ်တော့သောသူအပေါင်းတို့ရဲ့, ဒီဆောင်းပါးကနေ, သင်က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦးစစ်ဆေးမှတ်ထားဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျဤအ Multi-functional ဖြစ်စေအစီအစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။